Dablaydii Kaantaroolka Oog Ka Qafaalatay Labada Nin Oo Soo Daayay Mid Ka Mida Raggaa | Araweelo News Network (Archive) -
Dablaydii Kaantaroolka Oog Ka Qafaalatay Labada Nin Oo Soo Daayay Mid Ka Mida Raggaa
Laascaanood(ANN)Koox dabley hubaysan oo Kaantarool ku yaala magaalada Oog ka qafaalatay laba Nin ayaa sii deysay maanta mid ka mid ah Labadaa Nin oo Askari ahaa, halka ka kalena uu ahaa Nin shicib ah. Sidaana
waxa shebekada wararka ee Araweelonews u xaqiijiyay saraakiil ka tirsan Ciiadnka qaranka Somaliland eek u sugan jiida hore.
Kooxdaa oo qafaalatay laba Nin oo mid shicib yahay midna ka mid ahaa Askarta Kaantaroola ayaa dilay mid ka mid ah Askartii kale ee ku sugnaa kaantaroolka, isla markaana waxay dhaawac u geysteen mid kale oo Askarta ka mid ah, iyadoo qafaashay Labadaa Nin.
Ciidamada qaranka ayaa isku deyey inay gacanta ku dhigaan Raggaa. Laakiin uma suurta gelin, waxaynu ciidanku heleen gaadhigii ay wateen Kooxdu oo ku qalibmay meel dhinaca Buuhoodle kaga beegan magaalada Oog, kaas oo lasoo jiiday, isla markaana la aqoonsaday meesha uu ka yimi iyo cidii lahayd.
Hase yeeshee labadaa Nin ee ay Afduubka u kaxaysteen ayaa warkooda la waayay, balse wararka ka imanaya dhinaca magaalada Oog ayaa xaqiijiyay inay kooxdaasi maanta soo deysay mid ka mid ah labadaa Nin ee ay Afduubeen, iyadoo aan war laga hayn halka uu ku danbeeyay Ninkii kale. Wararka qaar ayaa sheegaya inuu Ninkaa kale ka baxsaday kooxdaa markii gaadhigii ay wateen qalibmay. Ka hor intii aanay ka talaabin xuduuda, isla markaana ay rasaas ku fureen, kaas oo aan ilaa hada geeri iyo Nolol mid uu yahay laga war qabin.
Wixii kasoo kordha warkaa kala soco arawelonews.com